म कसरी मेरो पूर्वाग्रह हटाउन सक्छु? हानि के हो? - Ne gerekir?
म कसरी मेरो पूर्वाग्रहहरू हटाउन सक्छु? हानी के हो?
पूर्वाग्रहको हानि के हो? म कसरी मेरो पूर्वाग्रहहरूबाट मुक्त हुन सक्छु?
हामी हुर्केका पारिवारिक वातावरण, हाम्रो वातावरण र हाम्रो अनुभवहरूको प्रभावका कारण हामी धेरै पूर्वाग्रहहरू प्राप्त गर्दछौं। यी पूर्वाग्रहहरूको साथ, हामी हाम्रो जीवन निर्देशित र कार्य गर्दछौं।
पूर्वाग्रहहरू यस्तै कडा भावनाहरू र विचारहरू हुन् जसले हाम्रो जीवनमा हाम्रो स्थान निर्धारण गर्छन्। पूर्वाग्रहहरू एक महत्त्वपूर्ण कारक हो जुन हाम्रो विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ। दुर्भाग्यवस, हामी यसलाई सजिलैसँग याद गर्न सक्दैनौं।
पूर्वाग्रह परिवर्तन गर्नु परमाणु चकनाचूर पार्नु भन्दा गाह्रो छ।
हामीलाई के जान्नु आवश्यक छ कि हामीले परिवर्तन गर्नुपर्दछ। हाम्रो पूर्वाग्रह अनुसार जीवन फरक हुँदैन। हामी परिवर्तन हुन आवश्यक छ। तपाईंले आफ्नो पूर्वाग्रहहरू अवलोकन गर्नुपर्दछ र तिनीहरूलाई स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईंले पछि उनीहरूबाट छुटकारा पाउन निर्णय गर्नुपर्दछ। अन्यले केवल चेतना जगाउन सक्छ, तर तिनीहरूले तपाईंलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनन्। केवल तपाईं यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंलाई प्रक्रिया चाहिन्छ।
हाम्रो पूर्वाग्रहहरूले हामीलाई समस्या निम्त्याउँदछ र हामी तीबाट मुक्त हुन सकेनौं भने धेरै कुरा गुमाउँछौं।
सीधा निर्णय गर्न असमर्थ
तिनीहरूको पूर्वाग्रह अन्तर्गत कुचिएको
एक साँघुरो फ्रेमको साथ विश्वलाई हेर्दै
रचनात्मक हुन असमर्थता
तपाईं आफ्नो क्षमता बढाउन सक्नुहुन्न
सफलताको नराम्रो असर
लक्ष्य पछाडि झर्दै
विश्लेषणात्मक रूपमा सोच्न असमर्थता
टीमको साथ पालना गर्न असफल
विश्वसनीयता को घाटा
नेता र प्रबन्धकको रूपमा देखिएको छैन
हामी सबै अरूको पूर्वाग्रहमा रिसाउँछौं, मानौं कि हामी आफैंको छैनौं। रिस उठ्नु अघि हामीले आफैलाई सोध्नु पर्छ; "के मसँग पूर्वाग्रहहरू छन्?" दुर्भाग्यवश, हामीसंग अधिकार छैन कि हामी आफैंको पूर्वाग्रह बदले बिना अरुलाई उनीहरूको पूर्वाग्रहहरु नष्ट गर्न भन।
के तपाईंले आफ्नो दिमाग बनाउनु भएको छ? सुरु गरौँ! तपाईंको पूर्वाग्रहहरू रद्दीटोकरीमा राख्नुहोस्, यसलाई जान दिनुहोस्!
म कसरी मेरो पूर्वाग्रहहरू नष्ट गर्न सक्छु?
हामी पूर्वाग्रहित छौं भनेर स्वीकार गर्दै
हाम्रा पूर्वाग्रहहरू हामी भएको ठाउँमा हामी रहेका छौं भनेर जान्नु
राम्रो पर्यवेक्षक हुनु
हाम्रो भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रयोग गर्दै
अहिले नै निर्णय लिइरहेको छैन
अर्को व्यक्ति पनि मानव हो भनेर सोच्न
हाम्रा कमजोरीहरू पहिचान गर्दै र निश्चित रूपमा नियन्त्रण लिदै
सचेत हुनुको कारण हामी आफूले लिने निर्णयहरू लिएर व्यक्तिलाई हानी गर्न सक्छौं
कम्तिमा दुई विकल्पहरू विचार गर्दै तुलनाहरू बनाउँदै
हाम्रो उद्देश्य भनेको मानिसहरूलाई समाजमा ल्याउनु हो।
त्यो सिक्काको पछाडि पछाडि छ भन्ने सोच्दै
हामी अरू जस्तो उत्कृष्ट हुन सक्दैनौं भनेर स्वीकार गर्दै
आफैंको आलोचना गर्न बिर्सनु हुँदैन
यो स्वीकार गर्न कि सत्य सबैको लागि हो, हाम्रो लागि मात्र होइन
सामाजिक अपेक्षाहरूमा एक नजर राखौं। सामान्य राय समस्यामुक्त मानिस र रोजगारीको अपेक्षाहरू अनुरूप छ। आज, संस्थागत संरचना पूरा गरिसकेका संगठनहरूले बिना समस्याहरूको व्यक्तिहरूको चयनमा ध्यान दिन्छन्। किनभने पूर्वाग्रहहरूले नकारात्मक परिणामहरू ल्याउछ भन्ने निर्णय निश्चित भएको छ। अवलोकनको परिणाम स्वरूप, यो अवलोकन गरिएको छ कि पूर्वाग्रह भएका व्यक्तिहरू भएको वातावरणमा सृजनात्मकता र उत्पादकता कम हुन्छ।
पूर्वाग्रहहरू मेटाएर, हामी सकारात्मक परिणामहरू प्राप्त गर्नेछौं र समाजको अपेक्षाहरू पूरा गर्नेछौं। हामी अझ बढी मर्यादित हुनेछौं भनेर जान्दछौं र सम्बोधनले हामीलाई यस मुद्दाको बारेमा बढी उत्साहित बनाउँछ। सही निर्णयहरूको साथ हाम्रो व्यक्तिगत शक्ति देखाउनुहोस्! हामी हाम्रो पूर्वाग्रहहरू मेटाउँदा सहयोगका लागि रुमी र युनुसको बारेमा सोच्न सक्छौं।
सत्यको सरल र सरल तरिकामा मेभलाना जस्ता निर्णयहरू गर्दै, यूनुस जस्ता निर्णयहरू लिँदै ... त्यहाँ यति अनमोल र रोमाञ्चकारी कुनै कुरा छैन कि एक व्यक्ति दायाँतर्फ जान सक्छ र उसको ज्यादतीबाट मुक्त हुन सक्दैन। मलाई आशा छ हामी यस सडकमा सँगै अगाडि बढ्न सक्दछौं ...